JMJ Katolika 2018 : Mpizaika iray hetsy no andrasana eto Mahajanga
jeudi, 12 janvier 2017 12:32
Sary Faritra Boeny
Araka ny vinavinan’ny Vovonam-pirenena Katolikan’ny Tanora (VPKT), dia ny 29 aogositra hatramin’ny 02 septambra 2018 no hanatanterahina ny Andro manerantany ho an’ny Tanora faha-9 na ny JMJ Mada (Journée mondiale de la Jeunesse). Ary ny renivohitry ny Faritra Boeny no voatondro handray azy.
Mikasika izay ary dia nandray ireo Komity mpanomana nasionaly Katolika izay notarihin’i Evekan’i Mahajanga, Mgr Rakotondrajao Victor Solo, ny Lehiben’ny Faritra Boeny Saïd Ahamad Jaffar, tao amin’ny birao fiasany Bloc Administratif Ampisikina Mahajanga, ny alarobia 11 janoary 2018.
Fampahafantarana ireo mpikambana ao amin’ity Komity ity sy ny tantaran’ny JMJ, ary ny ho fanatanterahana ny JMJ faha-9 eto Mahajanga no antondian’izy ireo. Teo ihany koa ny fangatahana fiaraha-miasa nataon’ireto vahiny tamin’ny Lehiben’ny Faritra amin’ny maha-mpampiantrano sady tompon’andraikitra voalohany azy amin’ny resaka fampandrosoana ara-tsosialy eto amin’ny faritra.
Tsy mora ny manao zavatra araka ny fiteny malagasy mahazatra, hoy ny Lehiben’ny Faritra, kanefa dia mora ihany ny manao zavatra rehefa feno fahavononana ny mpanao azy ary tsara sady matotra ny fiaraha-miasan’ny rehetra. Ka tsy ho avelanay ho irery ianareo amin’ny fanomanana sy fikarakarana ny JMJ Mada faha-9 io, fa hanao izay azo atao izahay hoy izy, mba tsy hampitsanga-menatra ny faritra mpampian-trano sy ny Fiangonana Katolika eto an-toerana.
Vinaina hatrany amin’ny olona iray hetsy (100.000) tokoa mantsy ny ho tonga eto Mahajanga amin’io fotoana io araka ny nambaran’ny Evekan’i Mahajanga, raha teo amin’ny enina alina (60.000) no isan’ny tonga tany Fianarantsoa tamin’ny JMJ ny taona lasa, izay somary nananosarotra ny fikarakarana azy ireo.
Manome vahana tokoa ny sosialin’ny tanora ny Faritra Boeny ka fotoana iray io hampisongadinana izany hoy ny Lehiben’ny Faritra Boeny io fotoana io. Nametraka ny ahiahiny ihany kosa nefa izy ny amin’ny fahatanterahan’io havoriambe nasionaly io manoloana ny fisian’ny fifidianana filoham-pirenena amin’io taona 2018 io.